Uchapupu Huchinongedzera kuKubatana Pakati peSERP Chinzvimbo uye Webhu Inotambira | Martech Zone
Mukupera kwaNyamavhuvhu, Matt Cutts akatsanangura kuti Google inotarisa nekumhanyisa saiti sechinhu chinowanikwa pawebhusaiti pane peji rekutsvaga Mune rake Webmaster Batsira vhidhiyo, akati: “Kana yako saiti iri, iri kunonoka, tataura kuti tinoshandisa kumhanyisa peji mune edu masosi. Uye saka zvese zvinhu zvakaenzana, ehe, saiti inogona kukwira kudzika.
"Zvino, isu tinowanzorega kutaura nezve zvinhu tichitarisa senhamba chaiyo yemasekondi nekuti mawebhusaiti anoshanda zvakasiyana munzvimbo dzakasiyana dzepasi, uye kune akasiyana bandwidth uye kumhanya munzvimbo dzakasiyana dzepasi.
“Zvisinei, inzira yakanaka yekufunga nezvazvo kuti utaure, zvakanaka, tarisa kwaunogara mawebhusaiti. Tarisa kune iwo masosi anodzorerwa pamwe newe, uyezve kana iwe uri wekupedzisira. Kana iwe urikumucheto chaiko kwekupedzisira nekuti saiti yako iri, inononoka chaizvo, hongu, zvinogona kudaro kuti saiti yako inodzika pasi nekuda kwekumhanya kwayo peji. "
Kukosha kwekutora nguva
Yakareba nguva yekutakura chave chinhu icho usability nyanzvi dzagara dzichipokana nacho, sevamwe varidzi vewebhusaiti vakarongedza mapeji avo epamba nezvinyorwa, mifananidzo, uye nezvimwe zvemukati izvo zvakaita kuti vashanyi vagare vakamirira kuti zvinhu zvitakure.
Chinangwa chaive chekuona zviri nani mushandisi ruzivo, asi izvi hazvina kubata pamwe neboka revagadziri vewebhu uye varidzi vesaiti. Vazhinji vakafunga kuti sarudzo yekupa yakawedzera "inotonhorera" zvinhu yaive yakakosha pane kudzivirira kunetseka kwevashandisi.
Iyo nharo inofarira mutengi
Asi neGoogle ichiita iyo nguva inotora saiti kurodha mubhurawuza remushanyi chinhu chakakosha padanho resaiti, vanhu vazhinji pasina mubvunzo vanozoona nekukurumidza nguva dzekutakura dzakakosha. Uye inokurumidza peji kurodha nguva kazhinji inotanga nemupi anopa iyo saiti.
Vazhinji vanotambira vanogovana maseva pakati pevakawanda vavo vatengi. Iwo mamwe mawebhusaiti anochengetwa pane yakasarudzika server, iyo yakawanda zviwanikwa zvinoshandiswa kumusoro uye kutakura nguva dzinotambura.
Nepo vazhinji vanogashira vanofambisa vanoendesa saiti yevatengi kune rakasiyana server kana mutengi achikumbira, dzimwe sarudzo senge dzakatsaurwa kuitisa kana chaiwo maseva akasarudzika anobatsira kudzikisa peji kurodha nguva. Dambudziko nderekuti havazi vese vanoita zvekutambira vane izvi sekusarudza; uye kazhinji, zvakaderedzwa kana zvemahara zvekubata zvirongwa hazvina izvo.
Kupfuura kungotakura nguva
Peji mutoro nguva inotora basa rakakosha mune chinzvimbo chesaiti. Nekudaro, handiyo chete inosiyana iyo inogona kukanganiswa newebhu inomiririra. Chengetedzo, nguva yekukwiridzira / nguva yekuzorora, uye nzvimbo zvinogona zvakare kutora chinzvimbo chakakura mukutsvaga mainjini ekutsvaga peji rewebhu.
Hapana munhu anoda kuti saiti yake ibviswe kubva kuGoogle, kana chero imwe injini yekutsvaga, nekuti zvinoitika kuve inobata malware. Asi zvakadaro chirevo kubva kuWhiteHat Security chinoratidza kuti makumi mapfumbamwe neshanu muzana emawebhusaiti ane njodzi imwechete inogona kubvumidza mubati kuisa kodhi yakaipa munzvimbo iyoyo.
Vaviri vezvimwe zvakajairika kutadza zvakanangana zvakananga newebhu inomiririra: FTP kushomeka uye server kumisikidza kushomeka.
Nguva yekupera / Nguva yekuzorora
Kana vashanyi vasingakwanise kuwana webhusaiti nekuti sevha iri pasi, saka injini dzekutsvaga hadziwane kwadziri kana. Webhu inomiririra iyo isingamire ne99.9 muzana yekukwirisa nguva yekuvimbiswa haifanire kutariswa nekuda kwekukanganisa kwakashata uku kungave nako pane ino saiti kuedza.
Makambani akavakirwa muUnited States anozokwira kumusoro pakutsvaga kunoitwa nemunhu muUnited States - kana saiti ichiitirwa muUnited States. Saizvozvo, mabhizimusi mune dzimwe nyika kana enharaunda matunhu anofanirwa kusarudza zvirongwa zvekutambira zviri padyo, nekuti tsvakiridzo inogadzirwa kubva mudunhu irori inoisa nzvimbo dzemunharaunda kumusoro uye zvakanyanya kukodzera.
Ehezve, kusarudza iyo chaiyo inomiririra hakureve chinhu cheSEO kana zvirimo nezvimwe zvinzvimbo zvikasateererwa; asi yekambani inotora ese maficha einjini yavo yekutsvaga zvakakomba mutariri chaiye anogona kuvapa iwo iwo madanho avanoda.
Gumiguru 4, 2013 pa 10:24 AM
Chinyorwa chinonakidza kwazvo, ndichave ndichitora izvi mukufunga nemagadzirirwo ewebsite yangu!